Portal:Turkiga/Hordhac - Wikipedia
Türkiye Portalına Hoş Geldiniz - Ku soo dhawoow Turkiga!
Turkiga Af-Turki: Türkiye Waxaa sida rasmiga ahaan loo yaqaan Jamhuuriyadda Turkiga Af-Turki: Türkiye Cumhuriyeti dhageyso waa dal ku yaal Bariga Dhexe. Xuduudna woqooyiga kala leh Badda Madow iyo Joorjiya dhanka barina Armeeniya iyo Iiraan dhanka koofureedna Ciraaq iyo Suuriya iyo Bada Midatareeniyanka sidoo kale xuduud badeed la leh Qubrus dhanka galbeed Badda Aajen iyo Giriig iyo Bulgaariya. waana xubin ka mid ah Ururka Iskaashiga Dhaqaalaha Badda Madow.
Waxaa ku yaal gacanka Boosfoor iyo Dardaniil iyo Badda Marmara - kaasoo kuu gudbinaya Badda madow Badda Aajen oo xiriirisa Aasiya iyo Yurub - kulkiisa taasoo ka dhigaysa Turkigu in uu yahay Istaraatiiji saameeye dalalka dhaca Badda Madow. Turkiga wuxuu ahaa xarunta xukunka dawladdii cusmaaniyiinta ilaa sanadkii 1922C.D ilaa laga aasaaso Jamhuuriyadda Turkiga sanaddii 1923 gacantii Mustafa Kemal Atatürk.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Portal:Turkiga/Hordhac&oldid=176854"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 11:41, 20 Luuliyo 2018.